Hayadda NCF oo qabatey Dood ku saabsan waxbarashada
Warar: June 29, 2007
Dil loo gaystay Guddoomiyihii waaxda koowaad ee Degmada Dayniile
Dowladda Mareykanka oo loo gudbiyey dacwad ka dhan ah Geedi.
Qarax lala beegsaday gawaari ay lahaayeen ciidamada Itoobiya oo ka dhacay...
Wasiirkii hore ee Gaashaandhiga Dowladda Federaalka haatanna xildhibaan ka ah Dowladda Federaalka ayaa maalintii doraad ahayd waxaa loo gaystay qarax aad u weyn oo ahaa mid meelaha fog fog laga hago, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday darawalkii Gaariga, waxaana ku dhaawacmay Barre Hiiraale iyo saraakiil kale oo la socotay.
Barrre Hiiraale oo la sheegay in uu soo gaaray dhaawac fudud ayaa waxa uu sheegay mar la wareystay in qaraxii lala beegsaday Gaariga uu saarnaa laga soo abaabulay magaalada Muqdisho lagana dambeeyey waxa uuna carabka si gaar ah ugu dhiftay Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed.
�Markii uu dhaawacu I gaaray, waxaa rasaas dabaaldeg ah laga riday xarunta Madaxtoonyada Dowladda Federaalka ee Magaalada Muqdisho� ayuu si kulul u yiri Barre Hiiraale oo sheegay in lagu raad joogo raggii loo soo adeegsaday qaraxasai, hase yeeshee afhayeen u hadlay Dowladda Federaalka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid aan sal iyo raad toona laheyn oo la doonayo in laga isaga hor keeno Bulshada Soomaalyeed.
Iyadoo ay weli sii kordhayaan dilalka loo gaysanayo mas�uuliyiinta Dowladda Federaalka, Ciidamada Booliiska iyo guddoomiyaasha degmooyinka Gobalka Banadir ayaa shalay degmada Dayniile lagu dilay guddoomiyihii waaxda koowaad ee degmadasi oo lagu magacaabo Max�ed Xaaji Cali, waxaana la sheegay in dilkiisa ay gaysteen saddex nin oo ku hubeysnaa Bistoolado.
Dhawaan ayay ahayd markii kooxo hubeysan ay dileen guddoomiyihii degmada Shibis Abuukar Xuseen Bandaas, iyadoo maamulka Gobalka Banaadir uu dhawaan ilaalo gaar ah iyo gawaariba siiyey guddomiyaha degmooyinka Gobalka Banaadir.
Duqa Magaalada Muqdisho Max�e Dheere ayaa waxa uu sheegay in kooxaha ka dambeeyey qaraxyada iyo dilalka ay yihiin kuwo aan dooneyn in dalku ay nabadi ka dhacdo balse doonaya in dalku uu sii ahaado dowlad la�aan, waxa uuna sheegay in aysan marnaba u dhutin doonin oo ay sii wadi doonaan hawlaha ay ku sugayaan amaanka Magaalada Muqdisho.
Wararka ka imaanaya dalka Mareykanka waxay sheegayaan in wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka loo gudbiyey dacwad ka dhan Ra�isul Wasaare Cali Max�;ed Geedi oo haatan booqanaya wadanka Mareykanka, waxaana dacwadaas gudbiyey dad Soomaali ah oo sheegay in Geedi uu Soomaaliya ka galay dambiyo dagaal iyo waliba xasuuq.
Dadkii gudbiyey qoraalkaasi waxay ka codsadeen Dowladda Mareykanka in ay talaabo adag ka qaado Cali Max�ed Geedi iyo waliba shaqsiyaadka la mid ah sida ay hadalka u dhigeen.
Magaalada Washington ayaa waxaa ka dhacay banaanbax looga soo horjeedo booqashada Ra�isul Wasaare Cali Max�ed Geedi ee dalka Mareykanka, waxayna dadka qaarkiis ku dhawaaqayeen �Geedi waa gacan ku dhiigle, waa nin maxkamad deg deg ah la soo taagaa� �Soomaaliya waxaa ka dhacay xasuuq ay gaysteen Ciidamada Itoobiya iyo Dowladda Federaalka�.
Wasaaradda arrimaha Dowladda Mareykanka qoraalkaasi waa ay ka aqbashay dadkii soo gudbiyey, waxayna sheegtay Wasaaraddu in ay baaritaan ku sameyneyso waxyaabaha ay ka tabanaan dadka Soomaliyeed Dowladda Federaalka.
Shalay subaxnimadii ayaa kolonyo ciidamo Itoobiyaan ah oo marayey agagaarka Hotel kaah oo ayna la socdeen kuwo kale oo Soomaali ah ayaa waxaa lala beegasaday qarax si weyn looga maqlay Magaalada Muqdisho, waxaana la sheegay in qaraxaasi uu gaystay khasaare naf iyo Gaadiidba leh.
Dad goob joog ahaa ayaa inoo sheegay in gebi ahaanba Gaarigii Itoobiya uu burburay isla markaana uu ku dhacay meel ka fog halkii uu qaraxu ka qabsaday, sidoo kalana gaari Cabdi-Bile ah oo ay saarnaayeen ciidamo Soomaali ah ayaa isna halkaasi ku burburay.
Waa qarixii labaad oo loo gayso ciidamada Itoobiya todobaad gudihiisa, iyadoo dhawaan gaari ay lahaayeen ciidamada Itoobiya lagu qarxiyey agagaarka Kulliyaddii Jaale Siyaad.
Waxaa maalmahan ku soo saa�idayey Magaalada Muqdisho qaraxyada iyo weerarada lagu hayo ciidamada Itoobiya kuwo Dowladda Federaalka, sidoo kale waxaa sii kordhayay dilalka loo gaysanayo xubnaha u shaqeeya Dowladda Federaalka.
Maalintii shalay ahayd ayaa dood ku saabsan Waxbarashada waxaa lagu qabtay Hotel Saxafi Two, waxaana ka qaybgalay Macallimiin, Aqoonyahano Arday iyo dad ehel u ahaa waxbarashadii Soomaaliya oo mudo ku soo dhex jiray, waxaana soo qabanqaabiyey Hay�ad wadani oo lagu magacaabo National Civic Forum, waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay Axmed C/lllaahi Ibraahim oo ah ka mid ah saraakiisha sarsare ee Hay�adaasi oo sheegay in doodaani ku saabsan waxbarashada aysan ahayen doodii ugu horeysay oo ay qabto hay�addooda, isagoo sheegay in doodaha noocaan ah ay ka soo bixin karaan sidii waxbarashada Soomaaliya loo horumarin lahaa... AKHRI....
Marxuum Ugaas Barkhdle Cumar oo ka mid ahaa Ismiada Puntland oo lagu Dilay Nairobi
Waxaana a dhawacay labo qof oo uu mid yahay dhaawac halis ah.... Akhri